Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye – Kalfadhi
Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye
Khadiija Maxamed Diiriye waxay ku dhalatay 2-dii Abriil ee sanadkii 1964 magaalada Muqdisho. Waa xildhibaan Soomaaliyeed ahna sidoo kale xilligan wasiir. Waxbarashadeeda hoose iyo dhexe waxay ku qaadatay Khadiija dugsiga Xasan Dhagey Buri ee magaalada Jowhar.
Intii u dhaxaysay sanadihii 1979-1981, Khadiija waxay tababar la xiriira macallinimada ka qaadatay dugsigii Xalane Teacher Training ee Muqdisho. Sanadkii 1988-kii, waxay ku biirtay jaamacaddii Lafoole laakiin ma aysan dhameysan sababo la xiriira arrimo hooyanimo.
Khadiija waxay barre ka ahayd dugsigii Xasan Dhagey Buri ee magaalada Jowhar intii u dhaxaysay sanadihii 1981-1982. Waxay ahayd ganacsade 1990-2000. Waxay ka qalin badalatay jaamacadda Hope University ee magaalada Muqdisho sanadkii 2014-kii.
Khadiija iyo siyaasadda
Waxay ahayd xildhibaan ka tirsan dowladii KMG ahayd intii u dhaxaysay sanadihii 2000-2004. Waxay noqotay xubin ka tirsan dowladii KMG ahayd ee lagu dhisay Empagathi, Kenya. Waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo daryeelka qoyska sanadihii 2005-2006-dii.
Waxay kamid noqotay xubnihii baarlamaanka ee lagu soo dhisay Jabuuti. 2010-kii, waxay noqotay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha. Waxa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda biyaha, batroolka, tamarta iyo qeyraatka macdanta sanadkii 2011-kii.
Sanadkii 2012, waxay xubin ka noqotay baarlamaankii 9aad ee Soomaaliya. Waxay noqotay guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka iyo arrimaha bini’aadanimada ee baarlamaanka Soomaaliya sanadkii 2013-kii.
Sanadkii 2014-kii, waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka. Sanadkii hore, waxay noqotay mar kale xubin ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iyada oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha.
Khadiija oo dhashay 5 carruur ah ayaa kamid ah siyaasiinta muddaba ku jiray saaxadda
siyaasadda Soomaaliya iyada oo lagu tirin karo shaqsiyaadka ugu magaca dheer baarlamaanka hadda shaqeeya iyo xukuumaddaba.
Waxay kamid tahay xildhibaanada baarlamaanka u matala beelaha Shanaad oo markii horaba laga soo doortay. Waxay ku hadashaa lahjadaha Maayga iyo Maxaa Tiri, waxaana intaa u dheer iyada oo si wanaagsan u fahmi karta luqaddaha Ingiriisiga, Carabiga iyo Talyaaniga.
Guddiga maaliyadda golaha shacabka oo la kulmay madaxda bankiga dhexe
Khilaafka khaliijka oo kala qeybinaya Soomaaliya
Ra’iisul Wasaare Rooble “Isbuuca soo socda Xildhibaannadii ugu horreeyay ee Golaha Shacabka ayaa la dooran doonaa”
Muqdishu oo lagu soo gabo-gabeeyay shir looga hadlayay bilaabidda xaraynta ergada doorashada Golaha Shacabka